चित्र-विचित्र – SidhaRekha
२०७४ चैत्र ५, सोमबार ०८:१२२०७४ चैत्र ५, सोमबार ०८:१२२०७४ चैत्र ५, सोमबार ०८:१२ by Sidharekha Online
सोसल मिडियामा अहिले एउटा भिडियो खुबै चर्चित छ । भिडियोमा एकजना हट्टाकट्टा युवती हातमा लौरो लिएर उभिएकाे देखिन्छिन् । । एकजना पुरुष उनको अगाडि उभिएको छ । अचानक ती महिलाले हातमा रहेको लौरोले युवकलाई जोडसँग पिट्न थाल्छिन् । अचम्मको कुरा त कुटाइ खाने त्यो युवक कुनै प्रतिकार गर्दैन । बरु लौरोको मार खप्न आफ्नो पिठ्युँ थापिदिन्छ । त्यति पिट्दा पनि नखदेझैँ गर्दछ र यदि पीडा असैह्य भयो भने बीच बीचमा उभिएर दुखेको भाग सुम्सुम्याउँछ र पुनः कुटाइ खानका लागि जिउ थापिदिन्छ । यस्तो हेरिरहँदा तपाइँलाई लागेको होला यो मान्छेले कुनै गम्भीर गल्तीको सजायँ भोगिरहेको छ । तर होइन । यो एउटा परम्परा हो । विवाहसँग जोडिएको परम्परा । दक्षिण अमेरिकी देश पेरुमा विवाह समारोहअघि बेहुलाले यसैगरी पिटाइ खानुपर्दछ । भिडियोमा पिटाई खाने युवक पनि हुनेवाला बेहुलो हो । बेहुला कुट्ने यो परम्परा निकै धुमधामसँग मनाइन्छ । य
२०७४ फाल्गुन १३, आईतवार १८:०१२०७४ फाल्गुन १३, आईतवार १८:०१२०७४ फाल्गुन १३, आईतवार १८:०१ by Sidharekha Online
स्टिभ जब्सले जागिरका लागि लेखेको निवेदन ५१ लाखमा बिक्री हुँदै
विश्वविख्यात प्रविधि कम्पनी एप्पलका सह संस्थापक स्टिभ जब्सले नोकरीका लागि भरेको आवेदन फार्म लिलाम गरिने भएको छ । सन १९७३ मा भरिएको यस आवेदन फार्म मूल्य ५० हजार डलर राखिएको छ । उनलाई खरबपति बनाउने कंपनी एप्पल स्थापना गर्नुभन्दा तीन वर्ष पहिले स्टिभले यो आवेदन भरिका थिए । उनले लेखेका उत्तरमा धेरै शब्दहरूका हिज्जे गलत छन् । यो एक पानाको दस्तावेजले प्रविधि क्षेत्रप्रति उनको रुचि प्रतिविम्बित गर्दछ । आफ्नो विशिष्ट योग्यताका ठाउँमा उनले ‘इलेक्ट्रोनिक्स, टेक या डिजाइन इंजिनियर’ भनेर लेखेका छ । उनले ‘के तपाईंलाई कम्प्युटर आउँछ ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर उनले ‘हो’ भन्दै दिएका छन् । यस आवेदनबाट जब्सले जागिर पाए या पाएनन् भन्ने जानकारी अझै आउन सकेको छैन । उनले आफ्नो नाम ‘स्टेभेन जब्स’ र ठेगानामा ‘रिड कलेज’ लेखेका छन् ।पोर्टल्याण्डस्थित यस कलेजमा जब्सले केही समय पढेका थिए । त्यस्तै उ
२०७४ माघ १७, बुधबार २०:४२२०७४ माघ १७, बुधबार २०:४२२०७४ माघ १७, बुधबार २०:४२ by Sidharekha Online
संसारकै वृद्ध व्यक्तिको मृत्यु
मङ्गलबार संसारकै सबैभन्दा बृद्ध व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । स्पेनमा बस्दै आएका फ्रान्सिस्को नून्ये ओलिवेराले एक महिनाअघि आफ्नो ११३ औं जन्मदिन मनाएका थिए । पहिलो विश्वयुद्धका बेला १० वर्षका उनी सन् १९०४ डिसेम्बर १४ मा जन्मिएका थिए । १०७ वर्षको उमेरसम्म दैनिक हिडडुल गर्दै आएका उनी बिहान एक गिलास दुध पिउथे । उनी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्थे । आफै सागसब्जी पकाएर खान्थे भने दैनिक एक गिलास वाइन पिउने गरेका थिए ।
२०७४ पुष ३०, आईतवार २१:१५२०७४ पुष ३०, आईतवार २१:१५२०७४ पुष ३०, आईतवार २१:१५ by Sidharekha Online
अर्कैको गल्तीले ओक्सानाको भाग्य चम्कियो, हात पारिन् ५० लाख डलर
अर्कैको गल्तीका कारण अमेरिकामा एउटी सामान्य मध्यमवर्गीय महिलाले ५० लाख डलर हात पारेकी छिन् । न्यू जर्सी राज्यमा बस्ने ती महिलाले स्टोर क्लर्कको गल्तीले अर्कै लटरी टिकट हात पारेकी हुन् । न्यू जर्सी राज्यको म्यानहट्टनको एउटा सुपर मार्केटमा सामान किन्न गएकी ओक्साना जहारोभलाई स्टोर क्लर्कसँग एक डलर मुल्य बराबरको लटरी टिकट मागेकी थिइन् तर भूलवश स्टोर क्लर्कले उनलाई १० डलर मूल्यको ‘सेट फर लाइफ’ लटरी टिकट थमाइदिइन् जसलाई स्क्र्याच गर्दा त्यसमा ५० डलरको पुरस्कार राशि भएको पाइएको थियो । ओक्सानाले जब आफुकहाँ दस डलर मूल्यको टिकट आएको थाहा पाइन् उनी त्यसको बाँकी पैसा चुक्ता गर्न चाहन्थिन् । उनले त्यो टिकट सुपरमार्केटको सम्झनाको लागि मात्र किनेकाले त्यसलाई धेरै दिनसम्म स्क्राचसम्म गरेकी थिइनन् । तर पछि त्यसमा रहेको ५० लाख डलरको पुरस्कार राशिले उनको भाग्य नै चम्काइदिएको छ । -विमेन्स वर्ल्डबाट
२०७४ पुष २१, शुक्रबार १३:३२२०७४ पुष २१, शुक्रबार १३:३२२०७४ पुष २१, शुक्रबार १३:३२ by Sidharekha Online
अनौठो धर्मादेश : बैंक कर्मचारीको परिवारका सदस्यसँग विवाह गर्न नहुने
इस्लामी धार्मिक कानुन या सरियत अनुसार ऋण दिएर ब्याज असुल गर्नु गैर कानुनी या हराम मानिन्छ । साथै यसरी हराम मानिएका व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नुलाई पनि इस्लामी धार्मिक कानुनले हराम नै मान्ने गर्दछ । इस्लाम धर्मका अनुसार धनको आफ्नो स्वाभाविक मूल्य हुँदैन त्यसैले यसलाई लाभका निम्ति कसैलाई प्रयोग गर्न दिनु या सिधा शब्दमा ब्याजमा लगाउनु हुँदैन । यही कारण हो कैयन् मुस्लिम देशहरूका इस्लामी बैंकहरू ब्याज उक्त बैंकिङ्गको अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यस्तै इस्लामी धार्मिक कानुनमा धर्मादेश या फतवाको पनि ठुलो महत्व छ । सामान्यतया धर्मगुरुद्वारा जारी गरिएका धर्मादेशहरू साह्रै गम्भीरताका साथ लिइने गरिन्छन् र कतिपय अवस्थामा त यिनले समाजमा नै उथल पुथल ल्याउला जस्तै हुन्छ । हालै एउटा फरक प्रकारको यस्तै धर्मदेश भारतमा जारी गरिएको छ । यहाँको एउटा प्रमुख इस्लामी शिक्षण संस्था दारुल उलुम देवबन्दले मुस्लिम
२०७४ श्रावण ३१, मंगलवार ०८:१७२०७४ श्रावण ३१, मंगलवार ०८:१७२०७४ श्रावण ३१, मंगलवार ०८:१७ by Sidharekha Online
चोरले हाम्रा केही चिज चोर्यो भने पिर पर्छ, सातो पुत्लो उड्छ । तर आयरल्याण्डकी लीसा कोएनलाई भने आफ्नो चिज चोरी हुँदा समेत त्यस्तो कुनै दुख लागेन । उल्टै मज्जा आयो । राजधानी डब्लिनमा ट्रामबाट यात्रा गरिरहेको बेला चोरले उनको यस्तो चिज चोर्यो की उनलाई रिस उठेन, उल्टै हाँसो उठ्यो । वास्तवमा चोरले उनको गोजीबाट रजस्वला हुँदा लगाउने प्याड चोरेको रहेछ । जब चोरले उनको गोजीबाट झिकेको चिज रजस्वला हुँदा लगाउने वस्तु हो भन्ने थाहा पायो, ऊ मनमनै निकै लज्जित भएछ । त्यसपछि उसले त्यो वस्तु पुनः लिसाकै गोजीमा राखिदिने कोसिस गर्यो । तर त्यसबेला सम्म लिसाले आफ्नो प्याड चोरले चोरिसकेको र चोरले पुनः आफ्नो गोजीमा राखिदिने प्रयास गरिरहेको पत्तो पाइसकेकी थिइन् । ट्राममा उक्त चोरलाई उनले के भनिन् भन्ने त खुलाएकी छैनन् । तर उनले पछि यसबारेमा खुलासा गर्दै टि्वट गरेकी छिन् । टि्वटमा उनले लेखेकी छिन्ः त्यस चोरक
२०७४ जेष्ठ ३१, बुधबार १०:४६२०७४ जेष्ठ ३१, बुधबार १०:४६२०७४ जेष्ठ ३१, बुधबार १०:४६ by Sidharekha Online
एक कुखुराले एक दिनमै पार्‍यो ३६ वटा अण्डा
एउटा कुखुराले २४ घण्टामा ३६ वटा अण्डा पारेको छ । भारतको जयपुरस्थित घाटगेटमा रइस खानले पालेको कुखुराले एक दिनमा ३६ वटा अण्डा पारेको हो । दिनमै ३६ वटा अण्डा पार्ने उक्त कुखुरा चर्चित बनेको छ । कुखुरालाई हेर्नका लागि टाढा–टाढाबाट समेत मानिसहरु आएका छन् । कुखुरा मालिक रइस र कुखुरा हेर्न आउने मानिसहरुले उक्त कुखुरालाई रमजानको महिनामा ईश्वरको चमत्कार मानिरहेका छन् । रइसका अनुसार मासु खानका लागि उनले बजारबाट उक्त कुखुरा किनेका थिए । बजारबाट किनेर घरमा उक्त कुखुरा थुनेर उनी कामका लागि बाहिर निस्किए । जब उनी बेलुका घर फर्किए, तब उनी हेरेको हेर्यै भए । उक्त कुखुराले सुरुमा १२ घण्टा भित्रैमा १६ वटा अण्डा पारेको थियो । अर्को बिहानसम्म त कुखुराले जम्मा जम्मी ३६ वटा अण्डा पारेको देखेपछि रइस र उनका परिवार तिनछक परे । एउटा कुखुराले बढिमा दिनमा २–३ वटा सम्ममात्र अण्डा पार्नेमा यस कुखुराले ३६ वट
२०७३ मंसिर १३, सोमबार १०:४४२०७३ मंसिर १३, सोमबार १०:४४२०७३ मंसिर १३, सोमबार १०:४४ by Sidharekha Online
श्रीमतीको तस्वीर देखेपछि लोग्नेले मागे डिभोर्स
सोसल मिडियामा यी महिलाको तस्वीर तथा तस्वीरसँग गाँसिएको कथा खुबै भाइरल बनेको छ । यो तस्वीर आखिर यस्तो खतरनाक तस्वीर हो, जसले यी महिलाको वैवाहिक जिवन नै भताभुंग पारिदियो अर्थात् डिभोर्सको कारण बन्यो । भयो के भने, जब यो तस्वीर ती महिलाका लोग्नेले देखे तब उनको होसहवास उड्यो र तत्कालै डिभोर्स मागे । घटना त्यसबेला भएको थियो जब लोग्नेचाहीँ भ्रमणको सिलसिलामा शहरबाहिर गएका थिए । उनले घरमा रहेकी पत्नीलाई धेरैपटक फोन गर्ने कोसिस गरे तर फोन उठेन । घण्टौँ पछि जब पत्नीले उनको फोन उठाइन् तब उनले आफुले नुहाइरहेको हुँदा फोन उठाउन नपाएको निहुँ पारिन् । ती महिलाका पतिलाई सायद शंका लाग्यो होला । उनले पत्नीलाई एउटा फोटो खिचेर पठाउन भने । जब उनले पत्नीको तस्वीर प्राप्त गरे सुरुमा मख्ख परे । तर जब उक्त तस्वीरलाई गहिरो गरी हेरे तब उनको होसहवास उड्यो । किनकी कोठामा उनकी पत्नी एक्लै रहेनछिन् । श्रीमती ब
२०७३ भाद्र ६, सोमबार १७:११२०७३ भाद्र ६, सोमबार १७:११२०७३ भाद्र ६, सोमबार १७:११ by Sidharekha Online
अहो ! मान्छेका सोख पनि कति विचित्र ! ज्यानलाई नै खतरामा राखेर जस्तोसुकै पीडा सहन तथा कुरुप बन्न बन्न समेत तयार हुन्छन् मान्छे ! हालै एकजना पुरुषले आफुले घरमा पालेको सुगाजस्तै बन्ने सोखका राखेर आफ्ना दुइवटै कान काटेर बुच्चो बनाएका छन् । र, आफ्नो नाकको सर्जरी गरेर सुगाको ठोँड जस्तै बनाउने प्रयत्नमा उनी छन् । उनले नाम नखुलाइएको अस्पतालमा ६ घण्टाको अपरेशनमार्फत् आफ्ना दुवै कान कटाएका थिए । मुहारभरि सुगाको जस्तै रङ्ग (ट्याटु) बनाएर मुन्द्रा समेत लगाएका यी अनौठा सौखिन मानिस बेलायतको ब्रिस्टोलका बासिन्दा हुन् । टेड रिचार्डसन नामका ती मानिसको उमेर ५६ वर्ष हो । उनले जिउभरि ११० वटा ट्याटु खोपिसकेका छन् भने जिउमा थप ५० वटा प्वाल पारेर सियो रोपेका छन् । साथै जिब्रो समेत चिरेर दुई फक्ल्याँटा बनाएका छन् । अब उनी यस्तो सर्जनको खोजीमा छन्, जसले उनको नाकलाई चराको ठोँड जस्तै बनाउन सकोस् । सन् १९७६ मा
२०७३ भाद्र ३, शुक्रबार १२:५९२०७३ भाद्र ३, शुक्रबार १२:५९२०७३ भाद्र ३, शुक्रबार १२:५९ by Sidharekha Online
चम्चा डुबाउँदा ठाडै हुने अनौठो चिया
चिया नेपाली जनजिवनमा निकै सर्वसुलभ पेय चीज हो । हामी कहाँ बसिबियाँलो देखि लिएर अतिथि सत्कार सम्मका लागि चियाको खपत निकै हुन्छ । हामी चिया भन्ने बित्तिकै दुध, चिनी, पानी र चियापत्तीको घोल मिलाएर पकाएको चिज हो भन्ने बुझ्छौ । यो तरल चिजमा चम्चा डुबाउँदा ठाडै अडिने भन्ने हुँदैन र ठाडो गरी हालेको चम्चा कपको बिटतर्फ ढल्किनु स्वभाविकै हो । तर अचम्म भारतको लखनउमा भने यस्तो चिया पाइन्छ जहाँ चियाको कपमा चम्चा डुबाउँदा चम्चा ठाडै उभिन्छ, ढल्दैन । लखनउमा यसलाइ खडे चम्मचवाली चाय भनिन्छ । लखनउमा यो चिया निकै चर्चित छ । नाम जस्तै यो काममा पनि उस्तै छ र चियाको कपमा चम्चा डुबाउँदा चम्चा ढल्दैन ठाडै हुन्छ । लखनउको त्यो चिया हैदरावादको इरानी चियाको एक प्रकार हो । आखिर चियाको गिलास वा कपमा चम्चा डुबाउँदा कसरी केहीपनि चिजको सहारा बिना चम्चा ठाडै हुन्छ त ? यसबारेमा चिया व्यापारीहरु केहीपनि बताउन चाह